Teknoolojiyadda Nolosha Nolosha: Kabaha Nolosha
Waxaan jeclaan lahaa in aan ka takhaluso xoogaa xan ah. Kama soo horjeedo raasamaal diineed. Uma maleynayo in maalgashadayaasha malaa'igtu runtii yihiin jinniyo. Xitaa uma maleynayo in qof walbaa ama xitaa inuu “bootstrap” ganacsigiisa si guul leh ugu guuleysto. Si loo caddeeyo, waxaan jeclaan lahaa inaan kaaga warramo sababta # 1 ee adiga iyo lamaanayaashaada aad ugu baahan doontaan inaad bilowdaan si xishood la’aan ah inaad ugu dhiirrigelisaan fikraddaada ganacsi ee badh-dubka ah qof kasta oo haysta lacag caddaan ah:
Sida erayga "bilowga" uu ula mid noqday raasamaal diineed, sidaas darteed sidoo kale waxay la mid noqotay "techie". Waxaa laga yaabaa inuu jiro xiriir halkaas. Waxyaabaha la isku raacsan yahay ayaa ah in bilowga cusubi had iyo jeer had iyo jeer uu yahay barnaamij mareeg, khibrad bulsho, ama kumbuyuutar ku habboon madaxa biinanka. Hadda, taasi had iyo jeer run maahan. Laakiin, haddii ay arrintu ahaan lahayd, markaa waa inaan gubo tayda buugga oo qiran in bilow kasta (marka ay arkeen sida ay yihiin [mala-awaal ahaan] dhammaan tiknoolajiyadda lagu wado) ay tahay in lagu nadiifiyo garoonkooda VC-ga oo mashquul lagu noqdo.
Teknolojiyada waa goob si dhakhso leh u koraya. Waxaan rajeynayaa in bayaankaas uusan cidna ka nixin. Sharciga Moore wuxuu noo sheegayaa in tikniyoolajiyaddu labalaabto 2dii sanaba marba (macnaheedu waa macneheedu). Laakiin xawaaraha bilowga ah ee loo baahan yahay in laga walaaco maahan xawaaraha ay ku shaqeynayaan horumarinaya ama qiimaha RAM-ka uu hoos u dhacayo. Xawaaraha ay bilaabayaasha tikniyoolajiyadda la xiriira ay u baahan yihiin inay ka walaacaan ayaa ah xawaaraha ay fikraddooda ku lumineyso cusboonaysiinta. Waa xawaaraha nolosha nus-bilowgeeda.
Haddii aad isticmaaleyso wax soo saar, aad jahwareerto, oo aad qiyaastid hab aad si fiican ugu qaban kartid, markaa waxaa jira qiime aad u baahan tahay inaad go'aamiso: Muddo intee le'eg ayay igu qaadaneysaa inaan dhiso badeecadan, u aado suuqa, ka dibna dhiso tiro culus? Kadib, is weydii haddii qofna uu daryeeli doono bartaas. Dhab ahaan! Ma jiraa qof dan ka leh inaad dhammaystirtay farsamada madax-nadiifinta VHS haddii ay kugu qaadatay toban sano inaad ku kasbato saamiga suuqa? Ma jiraa qof dan ka leh qalabkaaga dib loo celin karo ee silig-silig ah marka ilkaha buluugga ahi ku dhacaan guud ahaan? Kuwani waa tiknoolajiyada laga adkaaday, ma ahan tartan kasta, laakiin nolosha nuska ah. Tartan loogu jiro in dadka la wow, way lumeen.
Marka ay timaado tiknoolajiyada suuqgeynta, waxaan u maleynayaa in aan si badbaado leh u dhihi karo "bulsho" waa xoogaa ereyga guuxa ah maalmahan. Bulshaduna si indho la’aan ah ayey u soontaa. Isbedelada bulshada maalin kasta. Iyo, in kasta oo dhacdooyinka "feyraska" faafaya fikradaha, kharashka bulshadu lacag, sidoo kale. Bulshadu xor ma aha. Kama qorsheyn kartid inaad sameysid ifafaale bulsheed adigoon xoogaa riixin… dhaqso badan haba yaraatee. Xawaare, ka dib oo dhan, waa magaca ciyaarta.
Marka, goormaadan awoodin bootstrap waaye Haddii alaabtaadu ku dhisan tahay barxad bulsheed (Twitter ama Facebook) maalgeli. Haddii tikniyoolajiyadaadu ku tiirsan tahay daciifinta tikniyoolajiyada kale (sida madaxa nadiifiyeyaasha ama noocyada gacmaha ka caagan ee gacmaha lagu xidho) la maalgeliyo. Haddii aad ka baqeyso inaad qof u sheegto fikraddaada (maalgashiga ayaa ku jira) maxaa yeelay waxaad ka baqeysaa inay xadaan, ka dibna la maalgeliyo. Qiyaas waxa, waa inaad u sheegtaa qof goor dhow ama goor dambe si aad macaamiil u hesho, haddii ay runti sidaas u wanaagsan tahayna, qof kale ayaa nuqul ka samaynaya oo adeegsanaya VC inaan si dhakhso leh kuugu raaco oo aan xawaare kuugu soo maro suuqa. Haddii xawaaruhu kaa adkaan karo, markaa waxaad u baahan tahay inaad xawaare yeelato.
Shirkii Guusha Warbaahinta Bulshada 2011
Google wuu nadiifiyaa, Spammers ayaa u dhaqaaqa Facebook